Budiriro nzira-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd.
MunaNovember 2019, kambani yakagadzira key enzyme ye cephalosporin yepakati 7-ACA imwe-nhanho enzymatic kugadzirwa ----- cephalosporin C acylase yakabudirira uye yakagadzirwa maindasitiri, uye kutengesa kwakawanikwa.
Muna Gumiguru 2019, iyo yekambani tekinoroji inuction patents CN105802937A (gadziriro nzira yekudziya kupisa lipase) uye CN105802936A (gadziriro nzira yekudziya kupisa kupisa phytase uye yakanyanya kupisa kupisa phytase uye kushandisa kwavo) vakapiwa mvumo.
Muna Gumiguru 2018, iyo kambani enzymatic gadziriro yeursodeoxycholic acid yakanyorwa seyakakwira-tech kiyi yeprojekti neSainzi uye Technology Bureau yeWangcheng Dunhu, Changsha Guta, uye yakawana rubatsiro rwakakosha rwemari.
Muna June 2017, iyo kambani enzymatic gadziriro yeursodeoxycholic acid projekiti yakagadziriswa zvakanaka uye ikagadzira mushandirapamwe wekudyidzana neChangde Yungang Biotechnology Co, Ltd. uye yakawona iko kushambadzira uye kutengesa kweursodeoxycholic acid mfululizo enzyme.
MunaSeptember 2016, iyo kambani enzymatic kugadzirwa kwemushonga unoshanda kwazvo wekudzivirira mushonga cefprozil uye chirongwa chebudiriro chakabudirira uye chakazosvika nekubatana kwehunyanzvi nekambani yakanyorwa Chongqing Fuan Pharmaceutical. Panguva imwecheteyo, mishonga inorwisa mabhakitiriya yakadai sepenicillin acylase, penicillin synthase, uye deacetylase yakagadzirwa muNhangxia chigadzirwa chekugadzira.
Muna Nyamavhuvhu 2016, kambani iyi yakapinda mukusarudzwa kweyechipiri hunyanzvi hwekuvandudza uye bhizinesi muWangcheng Dunhu, Changsha City, uye yakasarudzwa seimwe yemapurogumi epamusoro mukugadzira maindasitiri.
Muna Ndira 2016, kambani yakachinja kero yavo yakanyoreswa kuChangsha Wangcheng Economic and Technological Development Zone, ndokuchinja zita rayo kuve Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd. Chikamu chebhizinesi chakawedzera kugadzirwa kwechikafu uye zvekuwedzera zvekudya, pamwe neiyo kupinza nekuendesa kunze kwenyika zvinhu zvakasiyana siyana uye zvigadzirwa. Iyo yakanyoreswa capital is 2 million yuan.
Muna June 2015, kambani yakapedza kutsvagisa nekusimudzira tembiricha yakanyanya kupisa phytase yekudya, uye yakaziva indasitiri munzvimbo yekugadzira yeNgxia Zhongwei Yakanakisa Industrial Park.
Musi waNdira 4, 2015, Changsha Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd., uyo akafanogadzwa weNanbeiwang Biological Technology Co, Ltd., yakavambwa muYannong Comprehensive Building, Changsha High-tech Zone. Iyo kambani inonyanya kuita biotechnology kuvandudza masevhisi, kubvunza, kuchinjana mabasa, kutumira mabasa; makemikari chigadzirwa kutengesa, kutsvaga nekusimudzira, nezvimwewo, ine yakanyoreswa capital of 1 miriyoni yuan.